Antanimora Voafonja 114 tsy maintsy hatao fitiliana
Voafonja 114 no indray hatao fitiliana iadiana amin’ny tsimok’aretina coronavirus ao amin’ny fonjaben’Antanimora.
Ny 24 mianadahy amin’izy ireo no efa vita soa aman-tsara ary nisantarana izany ny faran’ny herinandro teo ka anisan’izany ireo voafonja mbola tsy voatsara sy efa voaheloka nampidirina eny an-toerana taorian’ny 23 martsa lasa teo. Ny Brigade d’Intervention Spéciale etsy Analakely sy ny Institut Pasteur de Madagascar no nanao ny fitiliana taorian’ny fihibohana notanterahin’izy ireo nandritra 15 andro teny amin’ny Fonjaben’Antanimora ihany. Anio Alatsinainy moa no ho fantatra ny vokatr’izay fitiliana natao izay hahafahana mandray ireo karazana fepetra rehetra. Tsiahivina moa fa anisan’ny toerana be olona ka mora hifindran’ny tsimok’aretina coronavirus indrindra ny fonja, antony nanosika ireo tompon’andraikitra hiroso amin’izao fanaovana fitiliana izao. Miisa 20000 ireo voafonja manerana ny Nosy ankehitriny.